ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ် “ ပန်းခြံစာသင်ကျောင်း ” ၌ ပါကစ္စတန်ကလေးငယ်များ တက်ရောက်သင်ကြား - Xinhua News Agency
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အစ္စလာမ်မာဘတ်မြို့ ၌ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် “ပန်းခြံစာသင်ကျောင်း” တွင် စာသင်ကြားရန် ကလေးငယ်များ အခင်းဖျာချပ်များ သယ်ဆောင်လာစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အစ္စလာမ်မာဘတ်မြို့ ၌ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် “ပန်းခြံစာသင်ကျောင်း” တွင် နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင် စာသင်ကြားနေကြသည့် ကလေးများအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အစ္စလာမ်မာဘတ်မြို့ရှိ “ပန်းခြံစာသင်ကျောင်း” တွင် စာသင်ယူနေကြသည့် ကလေးငယ်များအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂသည် နှစ်စဉ် ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာရေးနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်၍ အခမ်းအနားများကျင်းပရာ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပညာရေး၏အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းကျင်းပခဲ့သည်။ ယခုနှစ်အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာရေးနေ့ ဆောင်ပုဒ်မှာ “ COVID-19 မျိုးဆက်များအတွက် ပြန်လည်နလံထူခြင်းနှင့် ခွန်အားသစ်ပေးခြင်း ပညာရေး ” “Recover and Revitalize Education for the COVID-19 Generation ဟူ၍ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
Asia Album: Pakistani children attend “park school” amid pandemic
ISLAMABAD, Jan. 24 (Xinhua) — Children wearing face masks attendaclass ata“park school” in Islamabad, capital of Pakistan ahead of the International Day of Education.
The United Nations designated Jan. 24 as the International Day of Education, in celebration of the role of education for peace and development. This year’s theme is “Recover and Revitalize Education for the COVID-19 Generation.”
(1,4,5,6)Children attendaclass ata“park school” ahead of International Day of Education in Islamabad, capital of Pakistan, Jan. 23, 2021. (Xinhua/Ahmad Kamal)
(2) Children carrying floor mats arrive ata“park school” ahead of International Day of Education in Islamabad, capital of Pakistan, Jan. 23, 2021. (Xinhua/Ahmad Kamal)
(3) Children wearing face masks attendaclass ata“park school” ahead of International Day of Education in Islamabad, capital of Pakistan, Jan. 23, 2021. (Xinhua/Ahmad Kamal